Laba Laacib Oo Uu Ku Dhacay Xanuunka Coronavirus Oo Farriin Layaab Leh Isku Diray – Cadalol.net
Saddex ciyaartoy oo ka tirsan kooxda Juventus ayaa u dagaallamaya sidii ay uga soo kaban lahaayeen caabuqa Coronavirus, iyadoo ciyaartoyda kale ee kooxda dhan ay ku jiraan takoor oo aan loo ogolayn inay gurayhooda kasoo baxaan.
Taariikhda ciyaaraha ayaa la geliyey Daniele Rugani oo difaaca ka ciyaara markii la shaaciyey inuu xanuunka Coronavirus ku dhacay, waxaana loo diiwaangeliyey laacibkii ugu horreeyey ee heerka koowaad ee horyaallada waaweyn ka ciyaara ee caabuqani ku dhacay.
Waxa ku xigay kubbad-sameeyaha Faransiiska ah ee Blaise Matuidi oo isagana uu kasii dambeeyey laacibka reer Argentine ee Paulo Dybala oo xalay shaacisay in isaga iyo gacalisadiisaba uu coronavirus ku dhacay.
Saddexdan ciyaartoy iyo gabadhan, waxay ka mid yihiin 59,138 oo waddanka Talyaaniga jooga oo uu ku dhacay caabuqa Coronavirus, halkaas oo ilaa hadda laga diiwaangeliyey in dhimashada ku dhowaad lix kun oo qof, halka Maraykanka oo kusoo xigana dadka uu xanuunkani ku dhacay ay marayso 32,037.
Haddaba, xiddiga reer France ee Blaise Matuidi oo aan wali kasoo kabanin xanuunkan ayaa farriin layaab leh u diray saaxiibkii Paulo Dybala, waxaanu ka dalbaday inuu ilaaliyo dhalaalkiisa xilliga uu xanuunkan la dhibaataysan yahay.
Farriintan oo nuxurkeedu ahaa inuu soo kabasho degdeg ah u rajaynayo, waxa uu Blaise Matuidi oo adeegsanaya bartiisa Twitterka uu ku yidhi: “Ilaali shacniga dhalaalka sida dahabka, walaal.”
Xaaladda Matuidi iyo Paulo Dybala ayey Juventus sheegtay inay wanaagsan tahay, sidoo kalena Rugani ayaa u dhow inuu dhamaysto 14-ka cisho ee karantiilka ah, laakiin looma ogolaan doono inuu dibedda usoo baxo maadaama waddanka oo dhan uu kala xidhan yahay.